Mayor Seçer na-enye Datebọchị maka Mersin Metro | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMediterranean Region33 MersinMayor Seçer na-enye Datebọchị maka Mersin Metro
29 / 11 / 2019 33 Mersin, Mediterranean Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Maps, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Metro, Turkey, VIDEO
Onye isi ala nyere ụbọchị maka mersin metro
Mayor Seçer na-enye Datebọchị maka Mersin Metro; Mersin Metropolitan Munista Vahap Seçer bụ onye ọbịa programsmail Küçükkaya bịara n'ụlọ mmemme “Mkpu.” Mayor Seçer mere nyocha banyere usoro Project na ahịrị ndị ọhụrụ na-agakọ.
Na nke mbụ, Maazị Seçer kwuru nkọwa zuru ezu banyere Metro ma kwuo, sị: “M ga-enweta ego itinye ego na Metro. Ego di nkpa. Anyị na-atụle usoro 3. 28.6 kilomita, 7 na ọkara kilomita n'elu ala Metro, kilomita kilomita 13.4 n'okpuru ụgbọ okporo ígwè na ebe ụgbọ okporo ígwè nke 7.7. Tụlee ụzọ dị n'ụsọ osimiri site na Mersin East ruo West. Igwe-ọsọ nke 13.4 ga-esi na ala ahụ, mgbe ahụ 7 ga-aga ọkara maịl site na elu gaa na Hospitallọ Ọgwụ Obodo. Nke a bụ oge mbụ m kọwara nke a n'ụzọ zuru ezu. Anyị na-echekwa ụzọ ụgbọ oloko na Hospitallọ Ọgwụ na Mahadum. Na 2020 anyị ga-agba pickaxe ahụ. Lee, anyị chọrọ ime nke a n'ụzọ dị iche. Anyị na-achọ otuto site na mba ofesi. Ka anyị si ebe ahụ nata ego ahụ, ka ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ahụ, anyị chọrọ inye ego na ịmalite azụmahịa ebe ọ bụla. ”
Mayor Seçer kwukwara na ha gara na ọkwa maka ịzụta bọs na ha ga-enweta ụgbọ ala 100 ngụkọta. N’ọnwa Jenụwarị, anyị ga-eburu ụgbọ ala 73, ụgbọ ala 27 ngụkọta. Anyị ga-emegharị ebe anyị na-anọ efe bọs, anyị enweghị ụkọ, anyị ga-eme ka ụzọ anyị sikwuo ike, anyị ga-agbanyụọ ụdị anyị nke mebiri emebi ma ọ bụ nke na-agaghịzi adị. Anyị na-atụle njem ụgbọ njem ọha dịka echiche nke Metro, ụgbọ ala na atụmatụ 100 nke afọ. Ihe anyị ga-eme n’agbata 5-2019, ụgbọ ala ole anyị ga-ewe, anyị gara ịzụta ya. Onwere ihe m huru n’iru m. Ọ dịbeghị ihe a mere. Maazị President nwetara ọrụ a na usoro itinye ego anyị na oge. Ma anyị kpuchie ya. Anyị akpọbatala ụzọ ụgbọ oloko na mpaghara nke nwere ọkwa mmepe mmekọrịta na-erughị ala. Usoro ụlọ ọgwụ City na-agafe mpaghara Mediterenian anyị, ma nwee ụlọ nke ezinaụlọ nwere ezigbo ụnwanyị. Ekwesighi ileta Metro dị ka ọrụ ụgbọ njem. Ekwesiri ileba anya na oru mmepe obodo bụ nke ọrụ mmekọrịta ọha na eze. Nke a gbasara anyị. ”
Mayor Aktaş na-enye Datebọchị maka Train Speed ​​Speed
Minista Yıldırım nyere ụbọchị maka Keçiören Metro
Minista, nyere ụbọchị nke Kocaeli metro!
Minista Turhan Gave History maka Metro Airport nke Istanbul
Minista Canikli na-enye ụbọchị maka oghere Ordu-Giresun Airport
Minista Yıldırım nyere ụbọchị maka ụzọ ụgbọ mmiri Ankara
Binali Yıldırım nyere ụbọchị maka nnukwu ọrụ (OZI OZI)
Yildirim na-enye Ụbọchị Ankara Metro Ụbọchị
Minista Yıldırım nyere ụbọchị ụgbọ oloko Keçiören (Foto Foto)
Openingbọchị mmeghe nke Mersin Metro
Banyere Mersin Metro
Akwụ ụgwọ nke Mersin Metro
Vidiyo Mersin Metro